Inkcazo: Hlela iAudio usebenzisa iTranscript | Martech Zone
Ayisoloko idla ngokuba ndonwabe ngetekhnoloji… kodwa Inkcazo isungule inkonzo yestudiyo sepodcast enezinto ezinomdla ngokwenene. Okona kulungileyo, ngokoluvo lwam, sisakhono sokuhlela iaudio ngaphandle komhleli weaudiyo. Inkcazo ikhuphela ipodcast yakho, kunye nokukwazi ukuhlela ipodcast yakho ngokuhlela isicatshulwa!
Bendi-podcaster okhutheleyo iminyaka, kodwa ndihlala ndisoyika ukuhlela ii-podcast zam. Ngapha koko, ndiye ndayeka udliwanondlebe olumangalisayo ukuba lwehla ecaleni kwendlela xa ulwazi olukwipodcast lwaluthatha ixesha… kodwa bendingenalo ixesha lokwenza ukuhlela ndilupapashe ngaphambi komhla obekiweyo.
Ngapha koko, ukuba ndibhala i-podcast yemizuzu engama-45, kuthatha iyure okanye iiyure ezimbini ukuhlela ngokupheleleyo ukurekhoda, ukongeza ii-intros kunye ne-outros, ukuyithumela ngokukhuphela, kunye nokuyipapasha kwi-Intanethi. Ndiphantse ndangcangcazela xa ndixhaswa ziirekhodi ezimbalwa. Okwangoku, sisixhobo esisebenzayo kwaye ndinabaphulaphuli abaninzi kangangokuba kufuneka ndiqhubeke nokutyhalela phambili.
Inkcazo ayisiyomhleli nje, sisiqendu sonke sePodcast kunye neVidiyo yeVidiyo. Enye into enomdla kukukwazi ukufaka amagama ongekathethi usebenzisa awabo Ngaphezulu phawu!
Iimpawu zeNkcazo zibandakanya
Ushicilelo oluphambili kushishino -Idrafti yamaqabane kunye nabanikezeli bokubhala abachanekileyo ukuze uqiniseke ukuba uhlala ufumana eyona nto ikhutshelweyo phaya.
Hlela iaudiyo okanye ividiyo ngokuhlela isicatshulwa -Tsala kwaye ulahle ukongeza umculo kunye nezandi. Ividiyo inokuthunyelwa ngaphandle kwiFinal Cut Pro okanye kwiNkulumbuso.
Sebenzisa Umhleli wexesha ukulungiswa kakuhle kunye nokuphela kunye nokuhlelwa kwevolumu.
Ukusebenzisana ngoku -Ixesha lokwenyani lokuhlela kunye nokubeka izimvo
Ukurekhodwa kweMultitrack -Idrafti ivelisa ngamandla umbhalo omnye odityanisiweyo
Ngaphezulu -Lungisa urekhodo lwakho lwelizwi ngokuchwetheza ngokulula. Ixhaswa ngu ILyrebird AI
Unxibelelaniso - Ukuhamba Zapier, ungaqhagamshela iNkcazo kumakhulu ezonaapps zaziwayo zewebhu.
Ukuba ungathanda ukujoyina i-Descript Beta, ungafaka isicelo apha:
Ingcebiso yomnqwazi kulowo ugxa wakhe uhloniphekileyo u-Brad Shoemaker e I-Creative Zombie Studios ukufumana!
tags: I-adobe yokugqibela yokusikaInkulumbuso ye-adobeaikukubhadla okungeyonyaniodiyoUmhleli weaudioinkcazoIsicatshulwa sepodcastlyrebirdILyrebird AIIiVidiyo zeNtengisoumhleli wepodcastistudiyo sepodcastKuqalaUkukhutshelwa kwevidiyo